विवश कुलुङ शनिबार, २५ फागुन २०७५
काठमाडौंको चाबहिलमा शुक्रबार बदाम बेच्दै गरेकी काभ्रेकी मुना तामाङसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (नारी दिवस)को बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘बाबु यो नारी दिवस भनेको के हो ?’ उनलाई केही थाहा छैन । तर उनी बदाम बेचेर जीविका चलाउँछिन् । उनका छोरा विदेसिएपछि उनले बदाम बेचेको आम्दानीबाट श्रीमान्–श्रीमतीको गर्जो टर्दै गरेकाले खर्चका लागि विदेशमा बसेका छोराको भर पर्नुनपरेको उनी बताउँछिन् । उनकी बुहारी र नातिनी काभ्रेमै बसेका उनले सुनाइन् ।
बालकोटमा दुई रोपनी क्षेत्रफलमा सब्जी उत्पादन गरेर बत्तीसपुतलीमा बेच्न आउनु नानीमैया मगरको दैनिकी हो । उनले एकदिन साग बेच्न छाडिन् भने त्यो दिनको आम्दानी पनि शून्यमा झर्छ । दैनिक छ÷सात सय रुपैयाँ कमाउँछिन् उनी । उनले गरेको मेहनतको कमाइबाट घर खर्च जुटाउने मात्र नभई एक छोरा र एक छोरीलाई उच्च शिक्षा पढाइन् । उनी भन्छिन्, ‘जागिरे भए पो नारी दिवस मनाउनु, म त श्रम गर्ने हो, एकदिन श्रम गरिएन भने आम्दानी केही हुँदैन । त्यसैले नारी दिवसको बारेमा केही थाहा छैन । थाहा भएर नि के गर्नु ? दिवसले पेटपाला हुँदैन ।’
काभ्रेकी सीता कुँवरले भीमसेनगोलामा हरेक दिन १ बजेपछि हरियो मकै पोलेर बेच्छिन् । दैनिक १२/१३ सयको बिक्री हुने गरेको बताउने कुँवरले यही पेसाबाट चार छोराछोरीलाई पढाउँदै आएकी छिन् । उनका तीन छोराछोरी क्याम्पस पढ्दै छन् भने एक छोरा कक्षा ५ मा पढ्छन् । उनले मेहनत गरेर सबै नानीहरुलाई बोर्डिङ पढाउन सकेकोमा उनी ढङ्ग छिन् । आफूले दैनिक मेहनत नगरे आम्दानीको स्रोत बन्द हुने गरेकोले मकै बेच्ने काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
माथिका घटना त केही प्रतिनिधि मात्र हुन् । आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा उनीहरू जस्ता लाखौं श्रमिक महिलालाई दिवस र यसको महत्त्वबारे जानकारी छैन । जानकारी पनि कसरी होस्, बिहानै उठेर आफ्नो काममा नलागे मुखमा माड पर्दैन । जतिलाई जानकारी छ, उनीहरुले पनि थाहा नपाए जस्तै गरी काम गर्नुपरेको छ । दिउँसो काम नगरे कतिको बेलुकाको छाक टर्दैन भने कतिका छोराछोरीले कापी कलम किन्ने पैसा पाउँदैनन्, अनि कतिले औषधि खान नपाउने अवस्था हुन्छ ।
श्रमिक नारी दिवस मनाइरहँदा वास्तविक श्रमिकहरुको बारेमा कसैले सोच्न सकेको देखिँदैन । नारी हकहितका लागि भनेर संगठित संघसंस्था पनि खोक्रा भाषण र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । यसबारेमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । नत्र यस्ता दिवस जति मनाएपनि त्यसको खास अर्थ हुँदैन ।
काठमाडाैंमा इद उल फित्रकाे रमझम (फाेटाे फिचर)
चित्रकलामा महिनावारीका पीडा (फोटो फिचर)
वाह ! इन्जिनियर चराको सुन्दर कलाकौशल (फाेटाे फिचर)
भुस्याहा कुकुर स्याहार्दै सकिन्छ प्रबन्धककाे तलब
लाप्चा गाउँ, जहाँ कहिल्यै मुद्दा मामिला हुँदैन
फूल व्यवसाय गर्नेका पीडा